Yongeza imveliso ye-imeyile ngemowudi engaxhunyiwe kwi-intanethi | IMarTech Blog
Uninzi lwabantu olundaziyo luyazi ngokuthandana kwam nalo I-inbox Zero. Kuqala kwenziwa kuthandwa ngu UMerlin Mann, Inbox Zero yindlela yokulawula i-imeyile kunye nokugcina ibhokisi yakho engenanto ingenanto. Kulungile Imveliso ye-imeyile inkqubo. Ndizithathile iikhonsepthi, ndazikhupha zangaphezulu, kwaye ndongeze izinto ezimbalwa ezintsha. Nam ndiyafundisa iiseshoni zemfundo kwimveliso ye-imeyile rhoqo.
Nangona ndingumlandeli omkhulu, ayinguye wonke umntu ozimisele ukuzibophelela ekulandeleni onke amanyathelo kwinkqubo ye-Inbox Zero eyiyo. Ndihlala ndiwela enqwelweni kwaye kufuneka ndithethe ndibuyele kwindawo eyonwabileyo ye-imeyile zen ngamanye amaxesha.
Nangona kunjalo, inye indlela elula evela kule nkqubo onokuyisebenzisa kwangoko kwaye ngokulula, kwaye eya kuthi ibenze lula ubomi. Ibizwa ngokuba "yimowudi engaxhunyiwe kwi-intanethi".
Uninzi lweenkqubo ze-imeyile zangoku (njenge-Apple Mail, i-Outlook, njl imo engeyo yokusebenza. Xa inkqubo yakho ye-imeyile isetelwe kwimowudi engaxhunyiwe kwi-intanethi, akukho imeyile intsha iya kulandwa kwaye ibhokisi yakho engenayo ayizukufumana nkulu. Xa eli lizwe livunyelwe, ngoku ukhululekile ukuskena ngokungacwangciswanga, ukuqhubekeka, kunye nokuphendula kwi-imeyile ngaphandle kokuziva uphazanyiswa yile imeyile ingenayo.
Ndiqale ukuyicinga le nto kwiminyaka embalwa edlulileyo ngelixa bendiza. Iinqwelomoya ezininzi ngoku zinika i-wifi ngexesha lenqwelomoya kodwa ubukhulu becala, ukubhabha kwakuthetha ukunqanyulwa ngokupheleleyo. Ndiza kuthatha ilaptop yam kwinqwelomoya kwaye ndiye ndaqala ukubona ukuba ndinemveliso kangakanani ngexesha lokuhamba. Ndikwazile ukuphendula amaqashiso kunye ne-imeyile kuba andiphazanyiswanga yimilayezo engenayo. Kwakumnandi nokungena kwi-intanethi emva kokuba ndifikile ndisiva u "whoosh!" Imiyalezo engama-50 ithunyelwa yonke ngaxeshanye.
Ukubeka inkqubo yakho ye-imeyile kwimowudi engaxhunyiwe kwi-intanethi kulula ukulinganisa amava afanayo kunye nemveliso kodwa kunye nebhonasi eyongeziweyo yokuvumela ukuba usebenzise iwebhu kunye nezinye izixhobo ngaxeshanye.
Zama olu vavanyo lulula: ngaphambi kokuba uvale inkqubo yakho ye-imeyile, usete kwimowudi engaxhunyiwe kwi-intanethi ngalo lonke ixesha. Ke, xa uyivula ngexesha elizayo, zibophelele ekuphenduleni okanye ekuqhubekekeni ii-imeyile ezininzi kangangoko unakho ngaphambi kokuyibuyisela kwimowudi ye-Intanethi. Gcina le veki kwaye ubone ukuba uqala ukufumana ulawulo olungcono lwe-imeyile yakho.
Ndingathanda ukuva izimvo zakho apha ngezantsi!
Jan 25, 2011 ngo-8: 37 PM
Le ngcebiso emnandi! Ndisebenze nzima ukuya kwi-inbox zero, kodwa bayaqhubeka nokuza! I-LOL ndinomncedisi ngoku oncedayo kwizicelo ezisisiseko ze-imeyile / imibuzo, kodwa ekupheleni kosuku, akukho mntu unokukwenza konke oko. Ndizakuzama oku kwaye ndibone ukuba kuyanceda na. Enkosi kunye neposti enkulu Mnu Reynolds.
Jan 25, 2011 ngo-9: 47 PM
Enkosi, Harrison! Ndazise ukuba ihamba njani 🙂
Jan 27, 2011 ngo-8: 17 PM
Ukucima ukwamkelwa okuzenzekelayo yeyona nombolo yam, inyathelo lokuqala lokunceda nabani na ukuba andise imveliso nge-imeyile.
Oku kuguqula i-imeyile isuka kumdlalo wabahlaseli bendawo (bayaqhubeka besiza!) Kumdlalo weSolitaire (thatha ixesha lakho ukoyisa ipakethe.)